Olee otú mpikota onu AVI Files na Mac / Win (Windows 8 gụnyere)
A nnukwu AVI faịlụ ma ọ bụ ụfọdụ nnukwu AVI faịlụ nwere ike mgbe na-enye gị nsogbu. Ha dịtụ fatter ozu, jiri ya tụnyere ndị ọzọ multimedia format, mgbe mgbe na-eme a otutu bi anyị disk ohere, nke na-eweta ala ala na-agba ọsọ ọsọ nke anyị na kọmputa. Ọzọkwa, ọ na-emekwa ka nsogbu mgbe anyị chọrọ ịkọrọ anyị mmasị AVI nkiri na YouTube ma ọ bụ Twitter. Bụ n'ebe ọ bụla ụzọ mpikota onu AVI faịlụ na Windows? Chọpụta, biko soro isiokwu a. (Rịba ama na, na Mac version-ahapụ gị mpikota onu AVI Mac.)
Nkebi nke 1: Solutions mpikota onu AVI faịlụ
Otu agadi echiche bụ mpikota onu AVI faịlụ na ụfọdụ ọkọlọtọ mpikota onu utilities dị ka pkzip ma ọ bụ .rar faịlụ. Otú ọ dị, n'ihi bụ obere na-eju afọ, ka na-agbalị ihe ọhụrụ.
Ngwọta 1: tọghata gị ochie AVI faịlụ ka ọhụrụ AVI faịlụ ma ọ bụ ndị ọzọ formats dị ka MP4, MKV, M4V faịlụ. Ọhụrụ nyopụta na ngbanwe nkà, ọ ga-aza nta size buturu.
Ngwọta 2: mpikota onu gị AVI faịlụ site edezi ha: 1) ewepụtụ gị AVI faịlụ: ihichapụ-enweghị isi akụkụ na na na-gị chọrọ akụkụ. 2) ubi gị AVI video ka kwa gị na-ekiri uto.
Ngwọta 3: tọgharịa parameters: Ị nwere ike ala eku ọnụego, bit ọnụego, mkpebi, wdg bee size ala nke ukwuu.
Luckily, a niile-na-otu video Ntụgharị (Windows 8 na-akwado) nwere ike isi nweta niile n'elu ọrụ. Ọ nwere ike tọghata gị mbụ AVI faịlụ ka nta niile ọzọ formats na oké ndakọrịta. Na ya ogbe akakabarede ike na wuru na-edezi ngwaọrụ, ị nwere ike mpikota onu AVI faịlụ na gị fingertips. Ebe a na-abịa a zuru ezu ntụziaka na Windows. (N'ihi na Mac ọrụ, ị nwekwara ike ibudata na AVI Compressor Mac ebe a.)
Part 2: A nzọụkwụ-site-nzọụkwụ ndu mpikota onu AVI faịlụ
Nkwadebe: Download a video Ntụgharị, na ịwụnye. Abụọ nsụgharị dị (Mac version na Windows version (Windows 10 gụnyere), nwere otu atụmatụ), na ebe anyị na-ewere windows version dị ka ihe atụ.
Nzọụkwụ 1: Ibu Ibu gị AVI faịlụ ka a AVI mkpakọ software
Wụnye na-agba ọsọ a AVI Compressor, ikpuru & dobe AVI faịlụ ka isi interface, ma ọ bụ gaa na menu mmanya na-ahọrọ "tọghata" "Tinye Files" Ibu Ibu gị AVI faịlụ. Ịnwere ike ịgbakwunye otu di na nwunye nke AVI faịlụ na-eme ogbe akakabarede ịzọpụta gị oge ukwuu.
Nzọụkwụ 2: mpikota onu gị AVI faịlụ site trimming ma ọ bụ cropping (Nhọrọ)
Mpikota onu AVI faịlụ site trimming: Gaa Edit Kpaa. Na e nwere otu ụzọ dị. Ịdọrọ slide mmanya ịkwaga n'ihu na azụ. Mgbe abịa gafee nri ọnọdụ, pịa scissor-dị ka button gbawaa gị mbụ video na ị na-mere. Mgbe ahụ, pịa OK ka laghachi isi interface.
Mpikota onu AVI faịlụ site cropping: Gaa "Dezie" button na onye ọ bụla video item mmanya, na mgbe ahụ họrọ "n'Ubi" site mmapụta edit window.
Pịa format na akara ngosi na "mmepụta Format" ebi ndụ na-emeghe dropdown ndepụta ma họrọ AVI, ma ọ bụ MKV, MP4, M4V, FLV, wdg si "Format"> "Video"
Gaa gear-dị ka "Mwube" button ka parameters maka ma ọdịyo na video, gụnyere mkpebi, etiti ọnụego, encoder, bitrates, wdg otú a nwere ike bee ala gị AVI size a otutu.
Nzọụkwụ 4: Malite Compressing AVI faịlụ ugbu a
Pịa "tọghata" ka a smart video Ntụgharị (Windows 8 na-akwado)-eme ndị ọzọ maka gị. Ọ bụrụ na ị na-achọghị chere gburugburu n'oge akakabarede, ị nwere ike ka ọ na-agba ọsọ na ndabere. Ọ gwụla. Great ọrụ!
> Resource> Video> Olee mpikota onu AVI Files na Mac / Win (Windows 10 gụnyere)